सर्प पाल्न झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानलाई ७२ करोड,हेर्नुहोस! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
सर्प पाल्न झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानलाई ७२ करोड,हेर्नुहोस!
काठमाडौं । नेकपाका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका नाममा खुलेको ‘झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रति,ष्ठान’ले सर्लाहीको लालब,न्दीमा साढे ८ विघा जमिनमा विषालु सर्प पाल्ने भएको छ । सर्पको वि,ष उत्पा,दन गरेर सुरुमा भारत सप्लाई गर्ने र , स्वदेशमै ल्या,ब स्थाप,ना गर्ने प्रति,ष्ठानको योज,ना छ ।
पन्तका अनुसार झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रति,ष्ठानले सर्प पाल,न र एन्टी भेनम उत्पादन परियो,जनाका लागि लालबन्दी नगरपालिका, प्रदेश २ सरकार र संघीय सरकारसँग ७२ करोड रुपैयाँको सम्झौ,ता गरेको छ । सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१ मा संस्थाले साढे ८ विघा जग्गा ख,रीद गरेर त्यहाँ विषा,लु सर्प पाल्ने तयारी अगाडि बढाएको पन्त बताउँछन्।
Previous म’लको हाहा’कार अ’न्त्य गर्न देशमै कारखाना खोलौं : डा. बाबुराम भट्टराई,हेर्नुहोस।
Next काठमाडौंमा स्वास्थ्य सं’कटकाल घो’षणा गर्न मा’ग,,, हेर्नुहोस्।